Lalana By Pass : Ankizy roa maty samy nofaohin’ny fiara
Lalana By pass...
Nitaraina ny mponina eny Ankazobe Alasora manamorona iny lalana By pass iny, fa tena mirimorimo mafy ny fiara mandalo eny.
Tato anatin’ny volana vitsy izay dia ankizy roa no maty tsy trà-drano teny an-toerana. Afak’omaly hariva dia ankizivavikely iray indray no maty voadonan’ny fiara.
« Mahitsy ny lalana ka mirimorimo mafy ireo fiara. Toy izany no nahazo an’i Lantonirina Faniloniaina, ankizivavy vao 10 taona monja. Avy naka rano teo ampita izy dia andeha hiverina hiantso ny reniny hibata ilay « bidon » feno rano, no sendra ity loza ity », hoy Razanakoto Michel sefom-pokontany ao Ankazobe-Alasora.
Teo amin’ny toerana natokana hiampitan’ny mpandeha an-tongotra mihitsy no nodonin’ny fiara marika « Mercedes berline » io ankizivavikely io.
Omaly ihany dia tonga teny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly Hjra ny tompon’ilay fiara nijery sy nanome tanana an’ireo fianakaviana tamin’ny fikarakarana ilay niharam-boina. « Nilaza ny hanampy amin’ny lafiny rehetra ilay tompon’ny fiara », hoy ihany Razanakoto Michel.
Teo amin’ity toerana nisian’ny loza ity ihany koa no nitranga ny loza ka nahafaty ankizy iraynodoninan’ny fiara-na kolonely, volana vitsy lasa izay. Saika nitarika olana teo amin’ity fokontany ity mihitsy io tranga io satria nisy ireo olona tsy nanaiky.